Khatarta khudrada laga keeno dibada WQ:Dr mustafa mohamed
Friday June, 22 2018 - 06:43:10
Monday April 03, 2017 - 15:32:47 in by salman abdi
Waxa jira in in dal kasta uu leeyahy suuq furan kaas oo la keeno waxyaabo badan oo si maalinle ah loo isticmaalo, hadaba waxa dhamaan aduunku leeyahay cid ka masuul ah keenista, faya dhawrka iyo ogolanshaha waxyabaha imanyaa dalkaas , taas oo muhiim
Waxa jira in in dal kasta uu leeyahy suuq furan kaas oo la keeno waxyaabo badan oo si maalinle ah loo isticmaalo, hadaba waxa dhamaan aduunku leeyahay cid ka masuul ah keenista, faya dhawrka iyo ogolanshaha waxyabaha imanyaa dalkaas , taas oo muhiim u ah ilaalinta caafimadka dadyowga dalkaas.
Hadaba waxa jira dalal badan oo dhowaan mamnuucay khudrada iyo waxyaabo badan oo laga keeno dalaka masar ama (EGYPT) kuwaas oo ku saleeyay kadib markii la baadhay ee la oagaaday in ay sababayso cuduro badan .
Tusaale ahan liin macaanta (Orange) laga keeno dalkaas waxa la ogaaday in lagu beerop biyo aan caafimad ahaan sax ahyn taas oo sababtahy in la joojiyo dhaman khudrada ka timadaa dalkaas masar.
Dalka USA waxa uu mamnuucay ku dhowaad boqolal shay oo ka iman jiray dalka masar kuwaas oo u badan waxyabah laga sameeyo caanaha iyo khudrado badan yada oo hayada cuntada iyo dawada maraykan (FDA) sheegty in ay sabayaan cuduro badan.
Dhowan aya dawlada sudan qabaty orange laga keenay dalkaas kuna soo galay sifo tahriib ah kadibna waa la baabiyay ,yaga oo ilaalinya caafimaadka dadkooda.
Hadaba waxa jira in dalkeena ay yimaadan khudrad badan oo ka timaada dalal badan kuwaas oo suuqa ka saaray kuwii dalka ka soo bixi jiray manta dalka sharabka ugu badan ee la cabaa waa orange waxana in badan la isticmaala liinta ka timi masar.
Dhaman dalalka aduunkan aan ku noolahy waxay muhiimad wayn siiyaan sidii loo ogaan lahaa wixii soo galaya dalka , taas oo ah mid ka mid ah xuquuqda muwaadinku ku leeyahy dawlada iyo hayada ay khusayso.
Waxa mmuhiim ah in la wacyi galiyo lana socdo waxyabaha ka imana dibada si loo ilaaliyo caafimadka muwaadinka .
Waxaan u soo jeedin lahaa hayada faya dhawrka Somaliland ama Somaliland quality control commission (SQCC) in ay baadhitan ku sameeyay khudrada ka imanysa dalalkas iyo in la hawl galiyo dhalinyarta soo baraty beeraha, wax soo sarka xoola , dawooyinka , chemistry ka iyo xanada xoolaha si loo helo lona ilaaliyo caafimadka muwadinka.
WQ:Dr mustafa mohamed
20/06/2018 - 19:28:03
Yaman:-Xuutiyiinta oo laga qabsaday qaybo kamida madaarka, iyo dekadda Xudayda
20/06/2018 - 10:11:40
Daawo WArbixin Laga Diyaariyay Khasaaraha Ka Dhashay Duufanti Ka Dhacday Salaxlay Iyo Maamuka
17/06/2018 - 18:47:10
QARAMADA MIDOOBAY IYO WADAMADA IGAD OO AAN WELI XAL UHELIN HESHIIS LAGA GAADHO DAGAALKA TUKA-RAQ.
17/06/2018 - 10:56:20
Berbera:Daawo Wiil reer Burco ah oo ku dhintay Badda Berbera iyo Dhalinyaro badan oo kale laga badbaadiyey
17/06/2018 - 09:13:24
Labo kun oo caruur ah ayaa waalidkood laga qaaday toddobaadyo gudahood
16/06/2018 - 10:04:43
War Deg Deg Ah Ciid Mubaarak---Wadamada Laga Arkay Bisha Iyo Tiradooda.